Fizahan-tany eny ~ Journey-Assist - Fitsangatsanganana eny amin'ny habakabaka
hevitra fizahan-tany eny an-habakabaka tamin'ny voalohany tamin'ny taona 1967 no nanehoana azy voalohany fa tao anaty 2001g olona voalohany, sata fizahan-tany, mpandraharaha italiana Dennis Tito tamin'ny faha-61g, nanao ny sidina habakabaka valo andro voalohany tao amin'ny sambon-danitra Rosiana Soyuz. 128 vantany vao nanodidina ny tany izy, nandoa izany 20 tapitrisa dolara. Naharitra ny fanomanana an'io sidina io. 8 volana sy nampidirina fa tsy ny fahasalamana ara-batana ihany, fa koa ny fahaiza-manao fototra amin'ny fitantanana ny sambo.
Mandeha miaraka amin'ny mpizahatany, ny orinasa dia mikasa ny hanomboka 2023taona miaraka amin'ny dia, maharitra herinandro, ka hatramin'ny volana. Amin'ny ampahany amin'ireo sidina ireo dia mety ho hitanao ny lafiny aoriana Ny volana, tsapao ny herin'ny zero ary jereo tanteraka ny kapila an'ny Tany.
Dingana manaraka, feno fitiavan-tena Elon Musk mahita sidina mankany Mars. Ankoatra izany, misy vondrona 100 ilay olona. Ny sidina voalohany dia vinavinaina amin'ny 2024.
Ho ampahany amin'ny fitsangatsanganana ireo dia hisy fotoana hahafahanao mahatsapa ny toetran'ny zero, ary amin'ny sarany dia mety hivoaka any amin'ny habaka ivelany. teo aloha, Space Adventures sy Roscosmos nikarakara fitsangatsanganana toby iraisampirenena (ISS).
Ny faharetan'ny sidina eo ho eo adiny roa sy sasany. vidin'ny 250 arivo $. Namidy tapakila 900, ary raha mbola miato ny varotra.
Blue Origin - Orinasa amerikanina Jeffrey Bezos (mpanorina ny Amazon.com). Niforona tamin'ny 2000 izy io. ho an'ny fizahan-tany eny amin'ny habakabaka.
Tamin'ny taona 2019 dia niditra tao amin'ny lisitry ny orinasa nofidina NASA ho an'ny fampandrosoana sy ny famokarana spacecraft ho an'ny fizarana amin'ny volana. Amin'ity taona ity (2019), ny orinasa dia mikasa ny hivarotra tapakila ho an'ny sidina amin'ny habakabaka azo averina New Shepard natao ho an'ny sidina suborbital. Mandritra ny sidina dia mpandeha 6 no hiakatra avo 100km, ary hanana fotoana mandritra ny minitra maromaro hahatsapa ny toe-piainana tsy misy lanjany, ary koa ny fahitana ny firaketan'ny Tany. Ny sandan'ny sidina tahaka izao dia 200-300 arivo $.
Orinasa tanora Orion span Nambarany ny tanjony hanorina trano fandraisam-bahiny voalohany "Fiantsonana Aurora". Ary ario ao amin'ny orbit Earth. vidin'ny 12 andro fitsaharana ao amin'ity hotely ity no andrasana $ 9,5 tapitrisa.
Ny vidiny dia ahitana ny hotely hotely, programa fiomanana telo volana ary koa ny famindrana any amin'ny hotely sy ny miverina.
Mampanantena ny tsy hay hadinoina ny fahatsapana.
Temple Tooth Buddha - Sri Dalada Maligawa
22.12.2019 / 1 Comment to Temple of the To Relic Relic - Sri Dalada Maligawa